Ukuphononongwa kwencwadi kunye nesicatshulwa kunye namanqaku- ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Uphengululo kunye neNqaku
Uphengululo kunye neNqaku
Azikho uphononongo lokuzisebenzisa. Ndisebenzisa ukungena kwebhlog, ngakumbi ukubhala ezona zimvo ziphambili endifuna ukuzikhumbula kwaye endifuna ukuziphanda kunokuba ndiphonononge ngokuphawula kwincwadi yam.
Ke, uya kufumana ulwazi oluninzi olunxulumene nesithuba ngasinye. Iingcaphuno, idatha ethile enomdla, imixholo evela apho ndifuna ukuzinzisa, unxibelelwano kunye nobudlelwane endibufumanayo nezinye iincwadi, iziganeko zembali, njl.njl.
Zizifundo endizenzayo. Andithethi ngeencwadi endingazifundanga.
Ndiyathemba ukuba bayakunceda ukuba uqhubeke nokufunda kwaye ukhule njengam.
Le ncwadi, iris yasendle nguLouise Gluck, ndayithatha kwithala leencwadi kuba yayikwishelufu ebalaseleyo apho bashiya uluhlu lweencwadi. Ndiyithathe ndingamazi umbhali kwaye ndingazi ukuba uphumelele iBhaso likaNobel. Emva kokufunda kabini ndiyithandile kakhulu, nangona ukuyonwabela ngokwenene ndicinga ukuba kufuneka ndiyinike ngakumbi.
Uhlelo kunye nombhali (uLouise Glück)
Uhlelo lweelwimi ezimbini, olusoloko luxatyiswa, luvela kwiNgqokelela yePoetry Viewer Collection Poetry Viewer yompapashi. umbukeli wencwadi, kodwa ndiyakhumbula ukuba inamanqaku. Ngenguqulelo ka-Andrés Catalán.
Yingcaciso ehlaziywe ngo-2021 yalo lonke ulwazi malunga nendlela eyakhiwe ngayo iNdalo yonke.
Umbhali usikhokela kuyo yonke into esiyaziyo malunga nokubunjwa kwendalo yethu. Ukwahlula kwizahluko ezisi-7, izigaba ezisi-7 ezineziganeko ezibalulekileyo ekubunjweni kwendalo yonke ehambelana neentsuku ezisi-7 zokusekwa kweNdalo yenkolo yobuKristu. Nangona izahluko zingangqinelani nosuku ngalunye, isibhalo siyahlula.
Elona bali lihle ehlabathini. Iimfihlo zeemvelaphi zethu nguHubert Reeves, uJoël de Rosnay, uYves Coppens kunye noDominique Simonnet. ngenguqulelo ka-Óscar Luis Molina.
Njengoko besitsho kushwankathelo, lelona bali lihle kakhulu ehlabathini kuba lelethu.
Ubume be "essay" bendiyithanda. Yahlulahlulwe yaba ngamacandelo amathathu ukuba 3 udliwano-ndlebe yintatheli Dominique Simonnet kunye ingcali kwindawo nganye.
Inxalenye yokuqala ludliwano-ndlebe kunye ne-astrophysicist u-Hubert Reeves ukususela ekuqaleni kwendalo yonke de kuvele ubomi eMhlabeni.
Kwinxalenye yesibini, kudliwan’ indlebe nesazi ngebhayoloji uJoël de Rosnay ukususela kwixesha lobukho bobomi emhlabeni de kwabakho ookhokho bokuqala babantu.
Imicimbi yobugcisa. Kungenxa yokuba ukucinga kunokutshintsha umhlaba.
Imalunga Imibhalo ebhalwe nguNeil Gaiman kule minyaka kwaye iboniswe nguChris Ridell ngalo mqulu. Ndabona incwadi elayibrari kwaye andathandabuza ukuyithatha. Sele ndimazi uNeil Gaiman Coraline, ngenxa Incwadi yamangcwaba nezinye izinto ezininzi endinazo kuluhlu kodwa andikazifundi (Iimerika zaseMelika, Sandman, Stardust, yakho Iintsomi zaseNordic, njl). UChris Ridell bendingazi. Inguqulelo luxanduva lukaMontserrat Meneses Vilar.
Ndihlala ndithanda ukufunda ezinye iintlobo zababhali ezinomdla kum, ngakumbi xa bezizincoko, izifundo kunye nezimvo abanazo ngobomi noncwadi.
Yiyo i-monograph kwiiglasi zeyure, iiwotshi zamaSilamsi kunye nezinye i-horologies ibhalwe ngu-Antonio Fernández-Puertas onguNjingalwazi weMbali yobuGcisa bamaSilamsi kwiDyunivesithi yaseGranada. Ungowombutho oPhezulu woBuchule beMyuziyam kwaye waba ngumlawuli weMyuziyam kaZwelonke yoBugcisa beSpanishi-yamaSilamsi eAlhambra.
Asikokufundelwa wonke umntu, kodwa ukuba ufuna ukungena kweli hlabathi leewotshi zamanzi, ii-automatons, ii-horologies, njl. Uya kulithanda. Ukongeza ekuchazeni inani elikhulu lezixhobo kunye nokusixelela ukuba ziphi kwaye nini, zangena kubukhosi baseByzantium ukubona ubungangamsha babo kunye nemimangaliso ekufuneka benayo.
Ngokukodwa kuba akukho lwazi lungako lufumanekayo kwi-Intanethi malunga neClepsydras kwaye yintoni ekhoyo andikwazi ukuyibona ngokupheleleyo.